Soumis par ikalamako le sam, 09/24/2016 - 09:17 Hanomboka anio 24 septambra ny fampirantiana miompana indrindra momba ny rarin-tsihy ka nomena ny lohateny hoe "Ny Rariny sy ny Tsihiny". Etsy amin'ny "Antshow Madagasikara" (Làlana Ramilijaona, Androndra - Antananarivo) no anaovana azy ary haharitra hatramin’ny 24 desambra 2016 amin’ny vidim-pidirana 1000 Ar.
- Ankoatra ireo tahiry ireo ve dia misy ihany koa rary tsihy ankehitriny aseho ao ? Mety ahasorena ny mpitady vola ity kanefa dia ho ataoko ihany satria fianarana ny fiainana. Eny misy rary tsihy ankehitriny mihitsy ao saingy tena samy hafa amin'ny fomba nandrariana taloha. Ataoko eo akaiky eo ny harona mafy kely sady tsara voatra mahazaka be sady maharitra, dia ataoko eo ireny fahita ankehitriny miondrana amin'ny fiarabe mpitatitr’entana any an-dafy ireny sy ireo hita amidy eny an-tsena rehetra ireo. Avelako hijery sy hisafidy ny olona raha hividy fa ny vidiny dia tsy mifankaiza kanefa dia tena samy hafa.
Tags: Kolotsaina Identifiez-vous pour poster des commentaires